Tayada Content vs. Tayada Backlink: Keebaa Muhiim ah? | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Tayada Content vs. Tayada Backlink: Keebaa Muhiim ah?
Tayada Content vs. Tayada Backlink: Keebaa Muhiim ah?
Weydii su'aasha SEO ee maanta waxay ka timid Swet ee California, kaasoo ku weydiinaya:
"Maxaa ugu muhiimsan SEO: tayada nuxurka ama tayada isku xirka?"
Su'aal weyn, Swet!
Dhammaan waxay ku saabsan tahay tayada macluumaadkaaga ee maaha tayada ama tirada backlinks kaaga. Laakiin taasi maaha oo kaliya dhanka SEO; waa dhanka kanaalka oo dhan.
Dad badan ayaa khilaafi doona, laakiin xariiqda hoose ayaa ah inaad bixiso khibrad tayo leh oo ku saabsan boggaaga haddii aad rabto tayada dib-u-celinta.
Haddii aad qaadatid dariiqa kale oo aad ka hesho taraafikada tayada leh ee backlinks, taraafikadaasi waa wax aan faa'iido lahayn haddii mareegahaagu uusan qancin baahida booqdayaasha.
Dib-u-celinta waa muhiim sababtoo ah waxay gacan ka geystaan ​​dhisidda kalsoonida iyo maamulka matoorada raadinta badan.
Dib-u-xireyaasha tayada leh waxay sidoo kale kuu keenaan macaamiisha cusub, akhristayaasha, iyo hoggaamiyayaasha, sababtoo ah waxay ka yimaadaan ilo asal ah oo khuseeya sida warbaahinta waaweyn, daabacadaha ganacsiga, iyo blogyada niche.
Laakiin maxay u fiican yihiin backlinks haddii waayo-aragnimada boggaaga internetka ay liidato oo booqdayaashaadu ay soo boodaan?
Taasi waa sababta waxyaabaha tayada leh ay uga muhiimsan yihiin dib-u-xireyaasha (ha ahaato mid wanaagsan ama mid xun).
Waxa ka kooban:
Nuqul: Qoraalka boggaaga, xulashada kelmadaha ee navigation, qaab dhismeedka qaybsan, rootiga rootiga.
Qaabka nuxurka laftiisa.
Xaaladaha qaarkood, alaabta aad soo saarto oo si toos ah u iibiso. Nuxurku waa boggaga rasmiga ah ee badeecada iyo sababta oo ah adiga iyo adigaa leh oo keliya, iyo nuxurka ku jira waa isku xidhka-mutacal.
Waxa kale oo muhiim ah dhammaanteen inaan xasuusano in SEO ay tahay qayb yar oo ka mid ah sawirka.
Haa, SEO waxay keentaa taraafikada iyo iibka, waxay buuxisaa liisaska iimaylkayaga, oo waxay dhistaa aqoonsiga sumadda.
Laakiin tayada tayada leh waxay u rogi doontaa PPC, influencer, affiliate, iyo taraafikada warbaahinta bulshada, ku hayso liiska emailkaaga oo ku hawlan oo sidoo kale ka saara tartamayaasha ereyada muhiimka ah ee gaarka ah ee backlinks aysan ku qiimeyn karin.
Shirkaduhu waa inay waligood ku tiirsanaadaan hal kanaal - oo ay ku jiraan SEO - dakhliga.
Waxyaabo kale oo laga yaabo inaad rabto inaad tixgeliso haddii ay tahay inaad kala doorato labadaba waa iyada oo aan lahayn wax tayo leh, ma jirto sabab macquul ah oo aad u leedahay dib-u-celinta tayada leh iyo makiinadaha raadinta ayaa qaban doona ciyaartaada.
Marka makiinadaha goobuhu helaan qorshahaaga isku xidhka, waxa aad qiimo dhimis ku helaysaa ama lagu ganaaxi doonaa nidaamka isku xidhka ee aan dabiiciga ahayn.
Si aad u hesho dib-u-xirid tayo leh, waa inaad wax samaysaa ama aad abuurtaa wax xusid mudan oo aad website-ka siisid kheyraad u qalma in lagu xidho.
Tanina waa waxa nuxurkaagu sameeyo. Waa aasaaska kuu keenaya beddelaad, akhristayaasha, iyo dabcan, dib-u-xireyaasha tayada leh.
Ka fakar sidaan. Haddii aad dhisto tiro tayo leh oo backlinks ah iyo waxa ku jira mareegahaagu waa qashin, kaliya waxaad khasaarisay dhammaan dadaalka waxayna u badan tahay inay waxyeello u geysato astaanta degelkaaga.
Marka aad hesho macluumaad tayo leh, booqdayaashu waxay xasuusan karaan waayo-aragnimadii ay hore u lahaayeen oo ay mustaqbalka kugu dhaafaan.
Dhammaan taraafikada adduunka dhib ma laha haddii aadan taraafikadaada u beddeli karin hoggaan, iib, macaamiisha, ama kor u kaca boggaga. Soo-booqdayaasha soo-booqdayaasha waxay kaliya ku kiciyaan xayaysiisyada adeegahaaga iyo xayaysiiyayaasha kuwaas oo sida caadiga ah ku kharash garaynaya CPM-yada sare ee meelaha xayaysiisyadaada.
Taasi waa sababta tayada tayada ay aad uga qiimo badan tahay tayada ama nooc kasta oo backlinks ah. Waxa kale oo aan shakhsi ahaan awooday in aan darajeeyo mareegaha iyada oo ku saleysan tayada tayada, qaabka goobta, iyo isku xirka dibadda.
Marka aan helno darajooyinkaas dhowrka ah ee ugu horreeya, waxaan sida caadiga ah bilownaa helitaanka ilo iyo xiriiriyeyaasha bogga waxay bilaabaan inay si dabiici ah u koraan.
Marka ay xiriiradaasi bilaabaan inay soo galaan, taasi waa marka ay xitaa sahlanaato in la helo dib-u-xirayaal badan iyada oo la adeegsanayo saxafiyiinta iyo ilo kale oo tayo sare leh.
Sida aan sheegay, dad badan ayaa is khilaafi doona. Laakiin xariiqda hoose waa inaad ku bixiso khibrad tayo leh boggaaga internetka haddii aad rabto tayada dib-u-celinta.
Oo haddii aad u qaadatid dariiqa kale si aad u dhisto backlinks oo aan ku salaysnayn mudnaanta macluumaadkaaga, taraafiggu waa wax aan faa'iido lahayn mar haddii maaddada mareegahaagu ay ku guuldareystaan ​​inay qanciyaan baahida booqdayaasha.
Marka hore diirada saar waxa ku jira, ka dibna u dhis dib u xidhidhyo tayo leh.
Waxaan rajeynayaa in tani ay ku caawineyso, waana ku mahadsan tahay akhrinta!
Sida loo Kordhiyo Saamaynta Dhismaha Isku xidhka 4 Tilaabo
Isku xirka Dhismaha SEO: Hage Dhamaystiran
12 Xeeladaha Suuqgeynta SaaS ee Waxtarka leh ee Koritaanka Skyrocket
Sida Loo Sameeyo Folders Chat Telegramka